နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: သူ စေညွှန်ရာစေ
သေ ဆို သေ
ရှင် ဆို ရှင်
မင်း စိတ်အစဉ်ကို အရိပ်လိုမလွဲ
(ဆရာမလွန်းထားထားရဲ့ ၀တ္ထုခေါင်းစဉ်လေး နှစ်သက်မိလို့ ၊ တိုက်ဆိုင်သွားလို့ ထပ်တူပေးဖြစ်ပါတယ်.......နောက်ပြီး ဒီကဗျာလေးကလဲ ဆရာမ၀တ္ထုကို ပြန်ရိုက်ထားတဲ့
ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ပြီး ခံစားမိတာလေးကို ကဗျာရေးထားတာမို့ မိုးနတ်မလွန်ဘူးထင်ပါရဲ့..
ဇာတ်ကားလေးကလဲ ကောင်းတယ်......အဲ့ဇာတ်ကားမှာ နောက်ခံသုံးထားတဲ့ သီချင်းလေးကလဲ
တိုက်ဆိုင်မှုရှိပြီး ဇာတ်ကားကို ပိုလို့အသက်ဝင်စေတယ်... “အမိန့်” တဲ့.........
အားလုံးပဲသိကြမှာပါ....မိုးနတ်တို့ ခပ်ငယ်ငယ်က ကိုဇော်ပိုင်ရဲ့ ပထမဆုံး ထွက်တဲ့ခွေထဲမှာပါပါတယ်...
ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဖေကြီးတို့ခေတ်မှာ ဦးကျော်(ကျော်ဟိန်း)
ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ.....သူ့သီချင်းပေါ့...အိမ်မှာတော့ ဖေကြီးဖွင့်လို့ မိုးနတ်ငယ်ငယ်ကတည်းက နားထောင်ရပါတယ်........ခု ကြီးမှ ပြန်နားထောင်တော့ သိပ်ကောင်းတာပဲလို့ ခံစားရတယ်......
အထူးသဖြင့် မိုးနတ်တို့လို ရင်ဘတ်ထဲက စာလုံးတွေကို ချပြီးစီနေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့.....
လိုင်းတွေက ဘယ်လိုမှကိုမကောင်းလို့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ်.......အဲလို အဲလို :(((
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:07 AM
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) March 1, 2013 at 7:43 AM
ဘုန်းတောက် March 1, 2013 at 8:39 AM
ဟာ မိုးနတ်ကလည်း အဲလောက်ထိ သူ ခိုင်းတာ မလုပ်ရဘူးလေ။ (မှတ်ချက် မိုးနတ်ကို သူ အနိုင်ကျင့်မှာစိုးလို့ သို့မဟုတ် ပင်ပန်းနေမှာစိုးလို့ ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်)
သံသာဝင်းလား ဘူလည်း တိဝူးးးးးးးးးးးးဆိုထားတာလေ............... မင်းအနားမှာ ခစားပါရစေသား....ကြင်နာစွာမြောက်စား......ကိုယ့်ရဲ့ရှင်ဘုရင်လေးဟာ........(တကယ်ရှေ့ဆက်မရတော့ဝူး..............ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြီးအောင် ဆိုသွားနော်..........)
ချစ်စံအိမ် March 1, 2013 at 11:24 AM
မိုးနတ်ရေ ကဗျာလေးဖတ်ပြီခံစားချက်တူသွားတာပို့ 
မိုးညချမ်း March 1, 2013 at 7:36 PM
ညလေးရဲ့ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်သော ကဗျာလေး ... ဒါနဲ့လေ စကားမစပ် ''အမိန့်''သီချင်းလေးကို ညလေးလည်း သိပ်ကြိုက်တာ သိလား မမ ... :)
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 2, 2013 at 4:16 AM
ပြောချင်ရာ ပြောပြီး အဲလိုထွက်ပြေးလို့ ရမလားးးးးး
နေအုံး မိအောင်လိုက်ဖမ်းအုံးမယ် :P
ဘုန်းတောက်လဲ သူကြီးနဲ့ အတော်အတိုင်အဖောက်ညီပါ့.....
ဘုန်းတောက်ပဲ မရရသရွေ့ဆက်ဆိုပြ :)
(မှတ်ချက် ။ ။ ဘုန်းတောက်ရဲ့ တုနှိုင်းမရ ချိုသာလှပါသော
အသံကို နားသောတ ဆင်လိုပါသောကြောင့် :P)
ဟုတ် မမလမင်းးးးးးးးး (ချစ်စံအိမ်)
မိုးနတ်လဲ သိပ်ကြိုက်ပါတယ် မိုးညရယ် :))) (မိုးညချမ်း)
Ma Tint March 2, 2013 at 7:00 AM
တဂျီးမင်းတို့တော်ပုံများ ကလောင်တစ်ချက် ကဗျာတစ်ရွက်ပါလား။
ဘုန်းဘုန်းတောက်ပြောသလို အဲ့လောက်ကြီးတော့ မချစ်နဲ့ပေါ့နော်း)
ဟန်ကြည် March 2, 2013 at 12:57 PM
အပေါ်ကနှစ်ယောက် ပြန်မလာပါစေနဲ့...ကဗျာမြင်သွားမှာစိုးလို့း)
မင်းအရိပ် March 2, 2013 at 2:01 PM
ဇာတ်ကားလဲ မသိ၊ လွန်းထားထား ၀တ္ထုလဲ မသိပါဘူး
ဒါပေမယ့် ကဗျာလေးကိုတော့ ဖတ်ရှုခံစားသွားကြောင်းပါ မိုးနတ်ရေ
witch83 March 2, 2013 at 8:06 PM
ကဗျာလေး ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် sis ရေ.. အပြင်မှာတော့ အဲ့လို မချစ်နဲ့နော်.. အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ပဲ ကောင်းပါတယ်လေ...း)
Thu March 2, 2013 at 8:08 PM
အသူဆိုအဲ့လောက်ချစ်တတ်ပါ့မလား။ခုတလောသူများတွေချစ်နိုင်တာတွေမြင်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင် အားငယ်လာတယ်။ချစ်သူ့ကို သိပ်မချစ်တတ်သေးလို့ :D
ဦးကျော်ဆိုကတည်းက ဒီသီချင်းကိုသိပ်သိပ်ကြိုက် :P
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 3, 2013 at 4:44 AM
အို မပူပါလေနဲ့ မစ်စတာဟန်ကြည် ( ဦးဟန်ကြည် )
မိမိုးနတ်က အဲ့နှစ်ယောက်လုံး မြင်အောင်ကို
တကူးတက ခေါ်ပြအုံးမှာ စိတ်သာချနေ ဟိ :)
အမ် မင်း ကလဲ ( မင်းအရိပ် )
ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ witch ရေ....
လိုက်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ် :)
( အသူ )
အို ဒါများ အားငယ်စရာလား အသူရယ်
ချစ်သာချစ်ပစ်လိုက် ကျန်တာနောက်မှ ကြည့်ရှင်းးးးးးးး
ဟီးးးးးးး အသူ့ကို အချွန်နဲ့ မနေတာ မနေတာ :P
မိုးနတ်လဲ အဲ့သီချင်း ခုတလော သိပ်ကိုဓါတ်ကျနေတယ်..:)
အမေပြောသလို ရောဂါတွေက တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးးးးးးး
roseayemaung March 3, 2013 at 4:55 AM
Sweety Snow March 3, 2013 at 1:52 PM
မိုးနတ်ရေ. မင်းအရိပ်ပြောသလိုပဲ..ဇာတ်ကားလဲမသိဘူး. ၀တ္ထုလည်း မသိဘူး.. ဒါပေမယ့် ကဗျာလေးကတော့ ဘယ်လိုရေးရေးကောင်းပြီးသား. :) အားပေးသွားတယ်နော် :-*
ရိုးမြေကျ March 3, 2013 at 9:52 PM
ခပ်တုံးတုံးလို့ပြောလဲခံမယ်ညလေး။ အစ်မလဲ ဇာတ်ကားရော ၀တ္ထုရော သိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကဗျာကိုတော့ အားရပါးရခံစားသွားတယ်ညလေး။
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 4, 2013 at 8:27 AM
ဟုတ်ကဲ့ပါ နှင်းဆီလေးရေ * နှင်းဆီအေးမောင် *
စနိုးက အဲလိုအဲလို အားပေးတာ ဟိ * စနိုးမေ *
အမ် ဒါဆို မိုးနတ်တစ်ယောက်ထဲပဲ အဲ့ကားကို
ဘာလို့ဆို မိုးနတ်လဲ ဟိုရက်က စိတ်လေနေလို့
ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ မြန်မာကားတွေ ငှားကြည့်တာ..
အာ့ကြောင့် သိတာဖြစ်မယ်နော် မ * မမရိုးမြေကျ *
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် March 5, 2013 at 2:21 AM
ကဗျာရော ကော့မက်တွေရော ကောင်း၏။ အလုပ်တွေများနေလို့ အများတွေလုပ်နေတဲ့
စာဖတ်တဲ့ဘက်တောင် မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် ။လာရောက်တာ နောက်ကျလို့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ညလေးရေ ။
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 6, 2013 at 7:18 AM
အားကြီးချိတ်ချိုးဒယ်နော် ချစ်ကိုကြီးးးးးးးးးး :P
ချစ်မကြီး နှစ်ယောက်စလုံးကို အရမ်း
သတိရနေပါတယ် :))) * အကိုလွင်ပြင်လှိုင်းငယ် *
ရည်ဝေ March 6, 2013 at 8:25 PM
ထာဝရ ခစားချင်ခဲ့တဲ့သူပါး)(တစုံတစ်ယောက်အပေါ် ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆို ရှုံးပြီလားမသိ)
ဟုတ်ကဲ့ပါ ..အဲ့လောက် အများကြီး မရှင်းပြပါနဲ့ ..သိပါတယ် ..သိပါတယ် :P :P
စကားမစပ် ကောင်းတယ်နော် ကဗျာလေးက :) :)
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 7, 2013 at 6:37 AM
မှန်တာပေါ့ မ ရယ် * ရည်ဝေ(ရေနံ့သာသူ) *
မိုးနတ်တော့ အဆုံးမှာ မရှုံးချင်ဘူးးးးးးးးး
တခါတခါ ကိုယ့်စိတ်ဟာ ထူးဆန်းတယ်...
ကိုယ့်ကိုယ်တောင် နားမလည်မိဘူးးးးးးးးးးး :(
ရဘူး ရဘူးးးးးးး ရှင်းပြမှာပဲ မီးက
ရှင်းပြချင်လို့ပါဆိုနေ * မမထရီဆာ * ကလဲ :P
လောင်စာ March 7, 2013 at 9:30 AM
အချစ်ရဲ့ကျေးကျွန်ဆိုတာ ဒါပဲနေမှာ....။ သူ့ဆီမှာ ကျွန်ခံတာမဟုတ်ဘူး။ အချစ်ဆီမှာ ကျွန်ခံတာလေနော့်...။ အားပေးသွားပါတယ်။ :)
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 9, 2013 at 6:09 AM
များများချစ်ရင် များများရှုံးတယ်ဆိုတာလေ :((
နွယ်လေး March 13, 2013 at 6:14 AM
အခုတလောလေ နွယ် ဖတ်မိတဲ့ ကဗျာတိုင်းက
ဘာကြောင့်များ နွယ်နဲ့ ခံစားချက်တွေ တိုင်ဆိုင်နေတာလဲ မသိဘူးနော်...
ချစ်မိသူသာ အရှုံးပါဘဲ ....
မိုးနတ်ကြယ်စင် March 13, 2013 at 6:44 AM